Yintoni Isiprofeto? | Imibuzo YeBhayibhile
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISpanish Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiBicol IsiBulgarian IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHausa IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKazakh IsiKikaonde IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLingala IsiLithuania IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMaltese IsiNepali IsiNgesi IsiNorway IsiOssetia IsiPapiamento (saseAruba) IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwahili IsiSwedish IsiTagalog IsiTatar IsiTelugu IsiThai IsiTiv IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTswana IsiTurkish IsiUkrainian IsiUmbundu IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu
Isiprofeto ngumyalezo ophefumlelwe nguThixo, osisityhilelo. IBhayibhile ithi abaprofeti “bathetha ngokuphuma kuThixo njengoko babeqhutywa ngumoya oyingcwele.” (2 Petros 1:20, 21) Umprofeti ufumana umyalezo kuThixo aze awudlulisele kwabanye.—IZenzo 3:18.
Abaprofeti bayifumana njani inkcazelo kuThixo?
UThixo wasebenzisa iindlela eziliqela ukuze adlulisele iingcamango zakhe kubaprofeti:
Wabhala. UThixo wasebenzisa le ndlela ngokubhalela uMoses imithetho elishumi.—Eksodus 31:18
Wathetha nabantu esebenzisa iingelosi. Ngokomzekelo, uThixo wasebenzisa ingelosi xa waxelela uMoses ngomyalezo awayemele awudlulisele kuFaro waseYiputa. (Eksodus 3:2-4, 10) Xa efuna ukuthetha into ebalulekileyo, uThixo wayeyalela iingelosi ukuba zidlulisele umyalezo wakhe ngendlela efanayo naxa wayeyalela uMoses. Wathi: “Wabhale phantsi la mazwi, kuba ngawo la mazwi ndenza umnqophiso kunye nawe noSirayeli.”—Eksodus 34:27. *
Wasebenzisa imibono. Ngamanye amaxesha oku kwakusenzeka xa umprofeti ehleli ibe esezingqondweni. (Isaya 1:1; Habhakuki 1:1) Ukubonisa ukuba eminye imibono yayisenzeka ngokoqobo, umntu eyayisenzeka kuye wayekwazi ukuba nenxaxheba kuyo. (Luka 9:28-36; ISityhilelo 1:10-17) Ngamanye amaxesha, imibono yayidluliselwa xa umntu elele. (IZenzo 10:10, 11; 22:17-21) Kwakhona uThixo wadlulisela umyalezo ngephupha xa umprofeti elele.—Daniyeli 7:1; IZenzo 16:9, 10.
Ukukhokela ingqondo. UThixo wakhokela ingcamango zabaprofeti xa babebhala umyalezo. Yiloo nto iBhayibhile isithi: “Sonke iSibhalo siphefumlelwe nguThixo.” (2 Timoti 3:16) UThixo wasebenzisa umoya oyingcwele okanye amandla asebenzayo ukuze aphefumlele iingcamango zakhe ezingqondweni zabakhonzi bakhe. Umyalezo wawungokaThixo kodwa umprofeti wakhe wakhetha nje indlela yokuwubhala.—2 Samuweli 23:1, 2.
Ngaba isiprofeto sisoloko sinento yokwenza nokuxel’ ikamva kwangaphambili?
Akunjalo, Isiprofeto seBhayibhile ayikokuxel’ ikamva kwangaphambili nje kuphela. Uninzi lwemiyalezo evela kuThixo iyathetha ngekamva nakuba ingatsho ngokungqalileyo. Ngokomzekelo, ngokuphindaphindiweyo isiprofeto sikaThixo salumkisa uSirayeli wakudala ngezinto ezimbi awayezenza. Ezo zilumkiso zazichaza iintsikelelo ezisezayo ukuba abantu babezithobela kuquka nentlekele eyayiza kubafikela ukuba bayala ukuthobela. (Yeremiya 25:4-6) Okwakuza kwenzeka kwakuxhomekeke kwikhondo amaSirayeli awayeza kulikhetha.—Duteronomi 30:19, 20.
Imizekelo yeziprofeto eziseBhayibhileni ezingathethi ngekamva
Ngesinye isihlandlo xa amaSirayeli acela uThixo awancede, wathumela umprofeti ukuba awacacisele kuba ala ukuthobela umyalelo wakhe, ngenxa yoko zange awancede.—ABagwebi 6:6-10.
Xa uYesu wathetha nebhinqa elingumSamariya, wathetha ngezinto ezazenzeke kulo awazazi kuphela ngenxa yokuba watyhilelwa nguThixo. Eli bhinqa lamazi njengomprofeti nakubeni engazange athethe ngekamva.—Yohane 4:17-19.
Xa uYesu wayevavanywa, iintshaba zakhe zamgquma ubuso, zambetha zaza zathi: “Profeta. Ngubani okubethileyo?” Babengathi kuYesu makaprofete ngezinto ezaziseza kwenzeka kodwa babefuna atsho nje ukuba ngubani ombethileyo, esebenzisa amandla kaThixo.—Luka 22:63, 64.
^ isiqe. 7 Nangona ekuqaleni kusenokubonakala ingathi uThixo wathetha ngokungqalileyo kuMoses kulo mzekeliso, iBhayibhile ithi uThixo wasebenzisa iingelosi ukudlulisela uMthetho kaMoses.—IZenzo 7:53; Galati 3:19.
Sasinjani isiprofeto esasidluliselwa ngabaprofeti bakaThixo? Funda ngezigidimi zabo ezine.
Ukuze sifumane impendulo, kubaluleklile ukuqonda ukuba iBhayibhile ithi yintoni le iza kuphela.